Tag: media sosialy | Martech Zone
Tag: media sosialy
Mamorona Tailwind: Mamorona, fandaharam-potoana, ary mamoaka Pins tsara tarehy amin'ny Pinterest
Alakamisy 10 martsa 2022 Alakamisy 10 martsa 2022 Douglas Karr
Ny Tailwind Create dia manao Pinterest Pins kalitaon'ny mpamorona haingana ary mamela anao hanatsara sy hanatsara ny varotra Pinterest rehetra ho tsara kokoa noho ny teo aloha. Amin'ny tsindry iray dia azonao atao ny manova ny sarinao ho hevitra famolavolana Pin am-polony manokana. Ny fitaovana rehetra ao amin'ny iray dia ahafahanao mamorona, mandamina ary mamoaka Pinterest. Ahoana ny fomba fandrafetana amin'ny Tailwind Create Ity misy horonan-tsary natambatra ny ekipa momba ny fampiasana ny Tailwind Create. Ny Tailwind Create dia ahafahan'ny mpivarotra Pinterest